Iindaba -Ungasikhetha njani isisombululo sentloko sokubekwa koomatshini bokubeka phambili be-SMT?
Xa iinkampani zikhetha oomatshini bokubekwa phambili, iimfuno ezintathu ezisisiseko kukuchaneka kokubekwa okuphezulu, isantya sokubekwa ngokukhawuleza, kunye nozinzo oluphezulu lokuqinisekisa ukubekwa kwesantya esiphezulu ngelixa lihlangabezana nokuchaneka kokubekwa kwezinto ezincinci.
Ukufezekisa iziphumo ezinqwenelekayo, isikimu sokubekwa kwentloko efanelekileyo (indlela yentloko) kubaluleke ngakumbi. Kuphela kuxa iskimu sichanekile apho ukucwangciswa kokubekwa kuya kusebenza ngakumbi.
Okwangoku, zininzi izisombululo zokubekwa kwentloko eziqhelekileyo: intloko enye esisigxina, iintloko ezininzi ezizinzileyo, ezijikeleza intloko enye kunye nokujikeleza iintloko ezininzi. Ukubeka nje, kukudibanisa umnqamlezo weendlela zokuhamba kunye nenani leentloko zokubekwa.
Imo yentshukumo 1: intshukumo yomgama
Esi sisombululo sinokwenza kuphela intshukumo yomgama, ihlala inengalo yeerobhothi okanye umqadi ukulawula iimoto ukunyusa ubungakanani besindululo, ukhetho olunendleko.
Umahluko phakathi kwentloko-ntloko kunye nentloko enye kukwandisa umthwalo ngeyunithi yexesha ngokwandisa inani lokubekwa kweentloko ukufezekisa injongo yokuphucula ukusebenza.
Imo yentshukumo 2: umgca othe ngqo + ujikelezo
Esi sisombululo sinokwenza intshukumo yomgama kunye nokuhamba ngokujikeleza ngaxeshanye, kwaye senze utshintsho olukhulu kwi-Z axis. Kwimeko yenani elifanayo lokubekwa kweentloko, kugcina indawo kunesisombululo esisigxina, ubunzima bokukhanya, isantya esisezantsi, kwaye ngaphezulu ngokuchaneka. Ilungele ngokukodwa ukubetha okufutshane, umthwalo ophantsi, iimeko eziphezulu zesicelo.
Ngaphantsi kwesikali esikhulu "somgca ochanekileyo + ujikelezo", umahluko phakathi kwentloko enye nentloko ezininzi uyafana nesisombululo esisigxina. Kubonakala ngathi yonyusa kuphela inani leentloko zokubekwa, kodwa ikwonyusa ubunzima bonke kunye nomthamo wezixhobo. Ukubekwa okuninzi Intloko isebenza ngaxeshanye.
Izisombululo ezahlukileyo zinamandla azo, kwaye iinkampani kufuneka zikhethe esona sisombululo sisiso ngokusekwe kwiimeko ezikhoyo. Qonda ngokubanzi ukusuka kubukhulu obuninzi njengendleko, ukuchaneka, isantya, uzinzo, njl., Kwaye ukhethe isisombululo esifanelekileyo sangoku. Eyona ilungele wena yeyona ilungileyo!